Loharano ho an'ny olon-dehibe | The Reward Foundation - Fitiavana, firaisana ary Internet
Home Momba anao Loharano ho an'ny olon-dehibe
Ao amin'ny 'Resources for olon-dehibe' dia nametraka teboka fanombohana tsara ho an'ny olona iray izay te hiala amin'ny fihetsika mifantoka amin'ny pôrnôgrafia.
Ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet be loatra dia mety hiteraka olana ara-batana sy ara-tsaina amin'ny olona sasany.
Toerana tsara hanombohana dia ny fihainoana ny tantaran'i Gabe Deem, ilay lehilahy nanangana Atsaharo ny firenena. Ity i Gabe miteny amin'ny hetsika iray Herizo-drivotra: Ny voka-dratsin'ny sary vetaveta amin'ny zatovolahy sy lehilahy ho an'ny Ivotoeram-pirenena momba ny fanararaotana ara-nofo ao Washington DC (12.30).
Asehon'ny fikarohana fa mitombo isa ireo manana olana. Ity tranonkala ity dia manome fampahalalana izay afaka manampy anao hiasa raha toa ka lasa olana ny fampiasana ary izay azonao atao ataovy izany. Misy fiatraikany amin'ny anao ve izany ara-tsaina or ara-batana ara-pahasalamana? Miteraka olana ve izany fifandraisana? Misy fiatraikany amin'ny fahaizanao mifantoka amin'ny fianaranao na any am-piasana? Ianao ve mijery fitaovana izay hitanao teo aloha maharikoriko sa tsia mifanaraka amin'ny mombamomba anao?
Ireo mpiara-miasa aminay Ny Tetik'asa Naked Truth dia namokatra ny sary mihetsika fohy mamelombelona mifototra amin'i Jason sy Ulysses avy amin'ny angano grika miaraka amin'ny hevitra maro momba ny fomba hialana amin'ny antso miafina momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet (2.45).